အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း – ECD
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်
၂၀၁၇ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်၌ကျင်းပရာ အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ငှက်တွေသည် ပျံရင်းသေရ သကဲ့သို့ မိမိတို့ လူသားတွေသည်လည်း ကြံရင်းသေကြရသည်ဟု့ ပြောစမှတ်ရှိသည့်အတိုင်း လူသားတွေသည် မိမိတို့၏ဘဝ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအတွက်သာမက ဘဝအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် အစဉ်ကြိုးပမ်းအားထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ကမ္ဘာဦး လူသားများ ဂူအောင်းနေထိုင်သည့်အခြေအနေမှ အဆင့်ဆင့် တိုးတက် မြင့်မားလာ ခဲ့ပြီး စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့လူသားများဘဝ အဆင့်အတန်းသည် သိသိသာသာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများထဲတွင် ရေခဲသေတ္တာ၊ လေအေးပေးစက်များ တီထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် ပြည့်စုံသာယာသည့်ဘဝများကို ဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့သကဲ့သို့ ၁၉၂၀ ခုနှစ်များတွင် ရေခဲသေတ္တာများ၌ အသုံးပြုသည့် အေးခဲစေသော coolant ဓာတုအရည်တစ်မျိုးသည် အလွန်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီး ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပါက လူတွေရဲ့ အသက်သေစေနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသိလာခဲ့ကြသည့်နောက်ပိုင်း စီအက်ဖ်စီဟုခေါ်သည့် ကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန် ဓာတုဒြပ်ပေါင်း ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို တီထွင်အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့ကြပါကြောင်း၊ စီအက်ဖ်စီသည် ၂၀ ရာစုရဲ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးအဖြစ် တွင်ကျယ်လာခဲ့ပြီး လူသားလူနေမှု ဘဝများကို ထူးခြားတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော် ကမ္ဘာ့လေထု၏ ဒုတိယအလွှာ စထရက်တိုစဖီးယားအလွှာတွင် ရှိနေသည့် အိုဇုန်းလွှာကို ကြောက်မက်ဖွယ် ရာနှုန်းဖြင့် ဖျက်ဆီးနေကြောင်း ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များ ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာသည် အလွန်လျင်မြန်သည့်နှုန်းနှင့် ပျက်စီးနေကြောင်း သိရှိလာခဲ့ကြပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာသည် လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိတိုင်းကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော နေရောင်ခြည်နှင့်အတူ ပါရှိလာသည့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ ၉၇ % ကနေ ၉၉ %အထိ စုပ်ယူကာ လူသားများကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကနေ သဘာဝအလျောက် ကာကွယ်ပေးနေသည့်၊ ကမ္ဘာ့သက်ရှိအားလုံးကို အကျိုးပြုနေသည့် အဖိုးတန်ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးလာသောကြောင့် နေရောင်ခြည်နှင့်အတူပါလာသည့် ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်လှိုင်းများသည် ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ အတားအဆီးမရှိ ပမာဏများပြားစွာ ရောက်ရှိလာပြီး အရေပြားနှင့် မျက်စိကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအပြင် အခြားသော ပြဿနာများ အထူးများပြားလာကာ မိမိတို့၏ ကမ္ဘာကြီးသည် အလွန်ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးမှုသည် လက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကြီးတွင် ကြုံတွေ့နေကြရသည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ လေထု၊ ရေထုနှင့် မြေထုညစ်ညမ်းမှုများ၊ မြေဆီလွှာ ပျက်စီးပြုန်းတီးမှု၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ သဲကန္တာရဖြစ်ထွန်းမှု၊ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်မှုတို့နှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဓိကပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ သက်ရှိကမ္ဘာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အိုဇုန်းလွှာကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအားလုံး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီး အိုဇုန်းလွှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်ထရီယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်တို့ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ ဆောင်ပုဒ်မှာ “နေရောင်အောက်က သက်ရှိတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ အိုဇုန်းလွှာကို ထိန်းသိမ်းစို့” “Caring for all life under the sun” ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးတွင်ရှိသည့် လူမှုစီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထုတ်လွှတ်ထွက်ရှိလာသည့် ကလိုရင်းနဲ့ ဘရိုမင်း အခြေခံသော ဓာတုဒြပ်ပစ္စည်းများသည် ကမ္ဘာ့လေထု၏ စထရက်တိုစဖီးယားအလွှာကို ရောက်ရှိသွားပြီး အိုဇုန်းလွှာကို ပျက်စီးစေခြင်းဖြစ် ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ နေရောင်အောက်တွင် ရှိနေ ကြသော လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိများအား ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်၊ လူသားတွေ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဆော်သြထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မွန်ထရီယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်၏ အဓိကမောင်းနှင်အားမှာ လူသား များ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်-ဘီ ရောက်ရှိလာမှု တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပျက်စီးမှုများကို တွန်းလှန်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မွန်ထရီယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သိပ္ပံသုတေသနဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များအရ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းအသစ်များ ထပ်မံတွေ့ရှိလာရသည့်အတွက် ပြင်ဆင်ချက်များ ထပ်မံချုပ်ဆိုခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် (၅)ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ မွန်ထရီယယ် ပရိုတိုကောသာမရှိရင် ကမ္ဘာကြီးသည် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ပိုပြီးကြုံတွေ့လာရဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စမှာ အဆိုးဆုံးတော့မဟုတ်သေးကြောင်း၊ သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် စိမ်းလန်းသောအပင်များကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အပါအဝင် နေရောင်ခြည် ၂၇ နာရီ ပေးလိုက်တဲ့အခါ စိမ်းနေသော သစ်ရွက်များသည် ညိုပြီး ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပိုမိုကျရောက်လာမှုကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းသွားမည် ဆိုပါက ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို ဆိုးကျိုးများစွာ သက်ရောက်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန် အမျိုးသားလေကြောင်းအာကာသအေဂျင်စီ (နာဆာ) မှ အကြီးတန်း သိပ္ပံ ပညာရှင်တစ်ဦးက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ထုတ်ဖော်တင်ပြထားတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ယနေ့တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသည့် ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗွန်သည် အိုဇုန်းလွှာကို ပျက်စီးမှု မရှိနိုင်သည့် အစားထိုးဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အိုဇုန်းလွှာကိုပျက်စီးစေသည့် ဘရိုမင်းနဲ့ ကလိုရင်းများ မပါဝင်သော်လည်း ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာစေရာတွင် အားကောင်းသော မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနှင့် မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ရလဒ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ရေခဲသေတ္တာနဲ့ လေအေးပေးစက်များတွင် ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗွန် သုံးစွဲမှုပမာဏကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ ၂၀၅၀ ခုနှစ်၌ ၁၀၀ မီလီယံတန်နှင့်ညီမျှသည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချနိုင်ခြင်း တို့ကို အထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗွန်သုံးစွဲမှု လျှော့ချ ခြင်းဖြင့် လူသားများနေထိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိလာနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အာဟာရချို့တဲ့မှုများ၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု၊ ရောဂါဘယဖြစ်ပွားမှုများ၊ သေဆုံးမှုများ၊ အိုးအိမ်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပွားခြင်းများမှ လျော့ပါးသက်သာလာစေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ များကြောင့်် အပူချိန်တိုးပွားမှုနှုန်း အလွန်မြင့်မားပြီး ယနေ့ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် ပြင်းထန်သည့် ရေကြီးမှု၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှု စသည့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးအနေဖြင့် ဟိုက်ဒရို ဖလူရို ကာဗွန် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချရေးအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကီဂါလီမြို့၌ ကျင်းပသည့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ၂၈ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ဟိုက်ဒရိုဖလူရိုကာဗွန် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ကီဂါလီ ပြင်ဆင်ချက်ကို သဘောတူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းသဘောတူညီချက်သည် ရာစုနှစ်အကုန်၌ ကမ္ဘာ့အပူချိန် ၀. ၃ ဒီဂရီ မှ ၀. ၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီယပ်စ်အထိ မြင့်တက်လာမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိုဇုန်းလွှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်နှင့် လန်ဒန်ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် ပြင်ဆင်ချက်အသီးတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့လူသားတွေ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအတွက် အရေးပါသည့် အိုဇုန်းလွှာကိုထိန်းသိမ်းရေးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကို အများပြည်သူများ သိရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လာ နိုင်ကြစေရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ဒြပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု၊ တင်ပို့မှုမရှိဘဲ ပြည်တွင်းသုံးစွဲရန်အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်း သုံးစွဲလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မွန်ထရီယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း အမိန့်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင် အိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည့် ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန်သုံးစွဲမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ရန်အတွက် ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန် တင်သွင်းသုံးစွဲမှုကို ၂၀၄၀ တွင် အပြီးသတ်လျှော့ချရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ် တင်သွင်းမှုကို ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြု ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းသို့ ပမာဏ များပြားစွာ တင်သွင်းနေသည့် ဟိုက်ဒရိုကလိုရို ဖလူရိုကာဗွန်များ ထည့်သွင်းထားသည့် မြင်းကောင်ရေ ၂ ကောင်ခွဲအောက် စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုကို မကြာမီမှာ တားဆီး ပိတ်ပင်သွားဖို့နဲ့ မြင်းကောင်ရေ ၂ ကောင်ခွဲအထက်ရှိသော စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဆက်လက်တားဆီးပိတ်ပင်သွားနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ ဒြပ်ပစ္စည်းတွေ ပြည်ပကနေ တရားမဝင် တင်သွင်းသုံးစွဲမှုများကို တားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း စသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး သင်တန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဆင့်ပွားသင်တန်းများကိုလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ မကွေး၊ ပခုက္ကူ၊ ဆင်တဲနဲ့ သာဂရမြို့များတွင် ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့စပ်လျဉ်းသည့် အောင်မြင်မှုရလဒ်အနေဖြင့် မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာအနေအထားသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနေကြောင်း၊ ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ယခင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်က အနေအထားကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ အန္တာတိကဒေသက အိုဇုန်းအပေါက်ဟာ ၂၀၇၀ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု့ ခန့်မှန်းရကြောင်း ဖော်ထုတ်တင်ပြထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါကြောင်း၊ အိုဇုန်းလွှာ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ အကောင်းဆုံး ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုကို ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်မှုရလဒ်ကောင်းများရရှိနေသည့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲ စာချုပ်ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားကြပါကြောင်း၊ယနေ့သည် မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ မြောက်နေ့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အိုဇုန်းလွှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်ထရီယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်၏ အောင်မြင်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုလျှော့ချရပ်ဆိုင်းရေး လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်အတူ ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းများ ကင်းဝေးစေရန် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှုလျှော့ချရပ်ဆိုင်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်အား ထက်သန်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပြရန် ပြောကြားပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးဝင်းမြင့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ စုစုပေါင်း ၂၅၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ပါသည်။
အစီအစဉ်အရ ကုလသမဂ္ဂအခြေချနေထိုင်မှုအစီအစဉ် ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Bijay Kamarchayar က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Antinio Guterres ၏ သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားပြီး အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပညာပေး ဗီဒီယိုကိုပြသကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီ ရုပ်သိမ်းပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများမှ အခမ်းအနားတွင် ခင်းကျင်းပြသထားသော အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုပြကွက်များကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Older Postပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း